Ny 8 safidy safidy PowerPoint maimaim-poana | Vaovao momba ny gadget
Ny safidy tsara indrindra mankany amin'ny PowerPoint
Tao anatin'izay 20 taona lasa izay dia hitantsika ny fomba nahatonga ny endrika roa ho lasa fenitra ao anatin'ny Internet. Amin'ny lafiny iray dia hitantsika ireo fisie amin'ny endrika PDF, endrika iray izay mifanaraka amin'ny fomba fiasa amin'ny rafitra fiasa rehetra ankehitriny nefa tsy mila mampiasa rindranasa ivelany hanokatra azy. Etsy ankilany, hitantsika ireo fampisehoana amin'ny endrika .pps sy .pptx. Ireo fanitarana ireo dia mifanaraka amin'ny fisie ho an'ny mamorona fampisehoana avy amin'ny fampiharana Microsoft PowerPoint.
Raha te hiditra amin'ny fampisehoana noforonina tamin'ity rindranasa ity dia ilaina ny manana mpijery mifanentana, izay rehetra mifanentana nefa tsy misy amin'ny fomba natoraly. Microsoft PowerPoint no rindrambaiko tsara indrindra hita eny an-tsena amin'izao fotoana izao mba hanaovana fampisehoana amin'ny karazany rehetra, saingy izy io dia fampiharana izay ilaina amin'ny fampiasana ny famandrihana Office 365 hahafahana mampiasa azy. Raha mitady rindranasa hafa ianao hamoronana fampisehoana, dia asehonay anao inona ireo fifandimbiasana tsara indrindra mankany amin'ny PowerPoint.
Anisan'ireo safidy hafa hita eny an-tsena ankehitriny, afaka mahita safidy malalaka sy karama isika, ka mety tsy hevitra ratsy ny mandoa ny famandrihana Office 365 raha mikasa ny hahazo tombony betsaka amin'izany isika mankany amin'ny PowerPoint, na amin'ny alàlan'ny sanganasanay mahazatra na amin'ny fotoana malalaka ahafahanay mamadika ny valiny ho video hahafahana mamoaka azy io amin'ny sehatra video efa be mpampiasa indrindra eran'izao tontolo izao: YouTube. Ny safidy sy ny fahafaha-manolotra izay omen'ny PowerPoint antsika dia saika tsy misy fetra, noho ny antony efa an-tsena an-taonany maro no sehatra tsara indrindra mamorona fampisehoana, toy ny Microsoft Word na Excel amin'ny sehatr'izy ireo avy.
1 Keynote, PowerPoint an'ny Apple
2 Google Slides, ny Google mpisolo toerana
3 Prezi, iray amin'ireo safidy tsara indrindra amin'ny Internet
4 Ludus, mamorona fampisehoana animated amin'ny fomba tsotra
5 Canva, inona no tena ilaina
6 Swipe, ovay ho resaka ny famelabelarana
7 Slidebean, ho an'ny zavatra mivaingana
8 Zoho, aingam-panahy avy amin'ny PowerPoint
9 Safidy tsara indrindra amin'ny PowerPoint?
Keynote, PowerPoint an'ny Apple
Atombohy amin'ny safidy maimaim-poana amin'ny Apple manome ny mpampiasa rehetra, na ny sehatra birao, macOS, ary ny sehatra ho an'ny fitaovana finday, iOS. Nandritra ny taona vitsivitsy izao, Apple dia nanolotra ny rindranasa Keynote ho an'ireo mpampiasa rehetra manana ID ao amin'ny Apple maimaim-poana, ho fanampin'ny ambin'ireo fampiharana izay ao anatin'ny iWork, na dia tsy manana terminal famokarana novokarin'i Apple aza izy ireo, hatramin'ny amin'ny alàlan'ny iCloud.com dia afaka manao ny serivisy rehetra atolotray antsika, ao anatin'izany ny Keynote, Pejy ary Nomery.
Na dia marina aza izany safidy maro be no tsy hita Mba hahafahana manamboatra na dia ny antsipiriany kely indrindra aza, dia iray amin'ireo safidy hafa maimaim-poana sy karama indrindra misy eny an-tsena izy izao. Ho fanampin'izay, manavao tsy tapaka ny rindrambaiko i Apple manampy fampiharana sy fitaovana vaovao ahafahantsika manamboatra bebe kokoa ny famelabelaranay ary koa manampy fampifanarahana bebe kokoa amin'ireo rakitra sy endrika.
Google Slides, ny Google mpisolo toerana
Ny safidy hafa maimaim-poana maimaim-poana tanteraka dia hita ao amin'ny efitrano fiasana an-tserasera natolotry ny Google antsoina hoe Slides. Slides dia a fampiharana cloud-based Amin'ny alalany no ahafahantsika mamorona ny fampisehoana ataontsika, fampisehoana fototra tsy misy volom-borona maro, satria mijaly noho ny tsy fisian'ny safidy maro izy io. Raha tsy maintsy miara-manao famelabelarana isika, ity serivisy ity dia iray amin'ireo tsara indrindra hitantsika eny an-tsena, satria manolotra firesahana amintsika ihany koa izany mba hahafahan'izay rehetra ao anatin'ny tetikasa hiara-miasa sy hiresaka amin'ny fotoana tena izy.
Ho tafiditra ao anatin'ny ekosistema Google, manana fidirana mivantana amin'ireo sary natobinay tao amin'ny Google Photos izahay mba hahafahana mampiditra azy ireo mivantana amin'ny fampisehoana nefa tsy mila mampakatra azy ireo amin'ny fotoana rehetra ao amin'ny rahona Google hampiditra azy ireo. Ny fampisehoana rehetra dia voatahiry ao amin'ny kaonty Google Drive anay, izay manolotra anay, miaraka amin'ny Gmail sy Google Photos, fitahirizana maimaimpoana hatramin'ny 15 GB. Google Slides dia ao anatin'ny Google Drive ary mamorona famelabelarana miaraka amin'i Google Slides, mila tsindrio fotsiny amin'ny New isika raha te hisafidy karazana rakitra tianao hamoronana.
Prezi, iray amin'ireo safidy tsara indrindra amin'ny Internet
Rehefa nanomboka ny fampisehoana PowerPoint, Prezi nanomboka lasa, amin'ny fahamendrehany manokana, iray amin'ireo safidy tsara indrindra azo raisina eny an-tsena, ary mbola misy mandraka androany. Misaotra an'i Prezi afaka mamorona fampisehoana mavitrika amin'ny alàlan'ny lohahevitra samihafa atolotray antsika ny sehatra, lohahevitra ahafahantsika manampy ny isan'ny zavatra fanampiny tadiavinay.
Misaotra ireo tetezamita mavitrika, fa tsy mijery toa ny mijery slide isika, dia hanome antsika ny fahatsapana fa mijery horonantsary kely isika izay na ny lohahevitra mankaleo indrindra aza mety hanjary mahaliana. Raha mikasa ny hampiasa vetivety an'ity serivisy ity ianao, Maimaimpoana tanteraka i Prezi raha tsy manana olana amin'ny famelabelarana ho an'ny rehetra ianao. Raha toa ka tsy te hizara ny zavatra noforoninao ianao dia tsy maintsy mandeha any amin'ny toeram-pisavana ary mahazo iray amin'ireo drafitra isam-bolana omena ity sehatra ity.
Ludus, mamorona fampisehoana animated amin'ny fomba tsotra
Ludus, toa an'i Prezi, iray amin'ireo serivisy web ity izay tato anatin'ny taona vitsivitsy dia naka ampahany betsaka amin'ireo mpampiasa mila mamorona karazana fampisehoana. Raha irintsika mamorona famelabelarana izay toa video kokoa noho ny fampisehoana Ludus no safidy tsara indrindra. Ao amin'ny horonantsary etsy ambony no ahitanao ny safidy rehetra atolotray antsika sy izay rehetra azontsika atao amin'ity serivisy mahafinaritra ity.
Iray amin'ireo tombony lehibe atolotray antsika raha ampitahaina amin'ny serivisy hafa toa ny Prezi, dia fampidirana amin'ny YouTube, Giphy, SoundCloud, Google Maps, Facebook, Instagram ... izay ahafahantsika manampy haingana ny atiny rehetra amin'ireo sehatra ireo. Noho ny fampidirana sy ny fifanarahana amin'ireo rakitra ao anaty endrika GIF, afaka mamorona sarimihetsika kely izahay fa tsy fampisehoana.
Ny kinova Ludus maimaimpoana dia mamela antsika mamorona fampisehoana 20, fitahirizana hatramin'ny 2GB ary ny mety hahafahana manondrana ireo sary mihetsika amin'ny endrika PDF. Fa raha mila zavatra bebe kokoa isika dia tsy maintsy mandeha any amin'ny boaty isika ary misafidy ny drafitra Pro, drafitra ahafahantsika mamorona fampisehoana tsy misy fetra, famelabelarana azontsika itahirizana ao amin'ny habaka 10 GB izay atolotra antsika , Fahafahana misintona ny famelabelarana ho an'ny ankehitriny raha tsy misy fifandraisana Internet ankoatra ny famelana anay hiaro ny fampisehoana amin'ny teny miafina.
Canva, inona no tena ilaina
Raha izay tadiavintsika dia a Tsotra, tsy misy frills solon'ny PowerPoint, ary samy Prezi sy Ludus dia lehibe loatra amintsika, Canva mety io no safidy tadiavinao. Canva dia manolotra sary be dia be ho antsika, hanampiana ireo famelabelarana maimaimpoana, hisorohana ny tsy maintsy hikarohantsika sary tsy tapaka an'i Google hamoronana fampisehoana. Tsotra dia tsotra ny fandidiana, satria tsy mila mifidy ireo singa tianay ampiana fotsiny isika ary hisintona azy ireo any amin'ilay toerana itiavantsika azy ireo amin'ny fampisehoana.
Mamela antsika koa io miasa miaraka, Manolotra anay fidirana amin'ny maodely mihoatra ny 8.000 sy fitehirizana 1 GB ao amin'ny kinova maimaimpoana. Raha misafidy ny kinova Pro isika, izay vidiny $ 12,95 isam-bolana, dia hanana fahazoana sary sy modely mihoatra ny 400.000 koa isika, afaka mampiasa endritsoratra manokana, mandamina sary sy fampisehoana ao anaty lahatahiry, endrika ivelany manondrana ho GIF ankoatran'ny afaka mampiasa azy io indray amin'ny fampisehoana hafa ...
Swipe, ovay ho resaka ny famelabelarana
Indraindray isika dia voatery mamorona fampisehoana izay tsy mila mampiseho fampahalalana an-tsaryFa kosa, momba ny fanolorana vaovao amin'ny alàlan'ny fanolorana safidy isan-karazany, ary arakaraka izay safidintsika no hisehoana ny vaovao iray na ny iray hafa. Raha izany dia, Swipe Izy io dia iray amin'ireo safidy tsara indrindra eo amin'ny tsena. Ho fanampin'izay, satria namboarina ho an'ity tanjona ity, afaka mampiditra lahatsoratra misy halava samy hafa isika noho ny fifanarahan'ny Markdown.
Ny kinova maimaim-poana dia mamela antsika hiara-hiasa amin'ny famelabelarana marobe tsy voafetra, mamorona fampisehoana manokana ary manondrana ny valiny amin'ny endrika PDF. Raha te-hanampy statistika izahay, fiarovana ny teny miafina, fanarahan-dia rohy, fanampiana ary maro hafa, dia tsy maintsy mivoaka amin'ny 15 euro isam-bolana isika.
Slidebean, ho an'ny zavatra mivaingana
Raha terena matetika isika mamorona karazana fampisehoana irayNa hanolotra vokatra, hitatitra ny valiny telovolana, momba ny tetikasa iray, na amin'ny toe-javatra hafa izay mitaky modely efa napetraka mialoha, tsary Bean Io no safidy tsara indrindra eny an-tsena. Amin'ny alàlan'ny Slidebean dia mila misafidy karazana modely tadiavintsika isika ary manolo ny angon-drakitra miaraka aminay. Tsotra toy izany.
Slidesbean dia tsy natao hanovana ny interface, na hanampiana na hanalana ny atiny, fa ho manamora ny famoronana araka izay azo atao ho an'ny mpampiasa, noho izany dia mifantoka amin'ny zava-dehibe fotsiny ianao ary ao anatin'ny 5 minitra dia afaka miomana ny famelabelaranao. Tsy toy ny serivisy hafa, Slidebean dia tsy manome antsika drafitra maimaimpoana hitsapana ny fomba fiasan'ny fampiharana, fa na inona na inona drafitra nofidiantsika, dia manana fotoam-pitsapana hahitana raha mifanaraka amin'ny filanay izany.
Zoho, aingam-panahy avy amin'ny PowerPoint
Raha manana ianao ampiasaina amin'ny PowerPoint ary tsy tianao ny manomboka mianatra ny fomba fiasan'ny serivisy na fampiharana hafa amin'ny famoronana fampisehoana, ZohoShow Io no zavatra akaiky indrindra amin'ny PowerPoint izay ho hitantsika, satria ny interface-ny ary ny isan'ny safidy, farafaharatsiny farafahakeliny, dia mitovy amin'ny hitantsika ao amin'ny rindranasa Microsoft. Manisy sary, boaty an-tsoratra, zana-tsipìka, tsipika… mora dia mora ny mamorona ny Zoho Show.
Mikasika ny isan'ny modely ananantsika, tena voafetra izany, tsy hilazana hoe tsy misy, fa raha ny anao ny eritreritrao ary tsy manana olana amin'ny fiatrehana horonan-tsary banga ianao dia mety ho hitanao ihany ilay rindranasa ilainao hamoronana fampisehoana mahazatra anao.
Safidy tsara indrindra amin'ny PowerPoint?
Ahoana no ahitantsika ny serivisy / fampiharana Internet izay nasehonay anao tamin'ity lahatsoratra ity mifantoka amin'ny tanjona samy hafa izy ireo, ka raha ny hamorona fampisehoana mahatalanjona no tanjontsika, ny safidy tsara indrindra dia ny Ludus, raha te-hamorona fampisehoana amin'ny alàlan'ny modely isika dia mety i Slidebean. Miankina amin'ny filainay ny zava-drehetra, noho izany dia mila mazava tsara ianao alohan'ny hanakaranao serivisy ary manomboka hahafantatra izany ianao.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao momba ny gadget » General » Tutorials » Ny safidy tsara indrindra mankany amin'ny PowerPoint
Google Drive dia mamorona endrika vaovao
Noho ny fanekena ny endrika any India dia nahavita nahita zaza efa ho 3.000 XNUMX very tao anatin'ny efatra andro izy ireo